Safiirka Qadar ee dalka Soomaaliya oo tegey magaalada Jowhar – Radio Daljir
Luulyo 27, 2019 4:16 g 0
Wafdi uu horkacayo safiirka dowlada Qadar ee dalka Soomaaliya Xasan bin Xamza ayaa maanta booqasho ku tegey magaalada Jowhar xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.
Xubnaha wafdigan ayaa waxaa ka mid ahaa Madaxa hay’ada Qadar Charity Cabdinuur Xaaji Cali, Madaxa bisha case ee Qadar Axmed Aadan iyo saraakiil kale.
Wafdigan ayaa waxaa xafiiskiisa ku qaabilay Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyagoo ka wadahadlay sidii Dowlada Qadar ay uga caawin lahayd dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan arrimaha horumarinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaale, beeraha, kalluumeysiga,dekedaha,warshadaha iyo dhismaha garoomada diyaaradaha.
Kadib kulanka ay yeesheen Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo Madaxweyne ku xigeenka Cali Cabdulaahi Xuseen iyo wafdigii ka socday dalka Qadar ayaa waxaa saxaafada la hadlay afhayeenka Maamulka Hirshabelle Daa’uud Xaaji Cirro isagoo sheegay in dowlada Qadar ay ballanqaaday inay dhiseyso dekeda Cadale.
“Dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar oo ay maalgelinayso dowlada Qadar waxaa uu bilaabanayaa toddbaadka soo socda,iyadoo dowlada Qadar Hirshabelle ka hirgelin doonto mashaariic ay ka mid yihiin horumarinta beeraha,qodista ceelasha, dhismooyinka garoomada diyaaradaha iyo dhismaha dekeda Cadale.”ayuu yiri Daa’uud Xaaji Cirro.